Simba resimbi rekushambadzira rekutengesa China Manufacturer
Tsanangudzo:Metal Detector Usa,Pd 6500i kubva Garrett,Metal Detector World for Holiday Village
Home > Products > Walk Through Metal Detector > Door Frame Metal Detector > Simba resimbi rekushambadzira rekutengesa
Mafambiro esimbi anogadziriswa nehugandanga, uko kune hugandanga ipapo iyo misika ichava mune simba guru. Zvakafanana nemucheka mutsvuku uye mukoti, vanogona kudzivisa hugandanga kuti huitwe. Uye uchengetedze hupenyu hwevanhu nezvinhu. Simba resimbi rekutengesa rekutengesa, Walk Through Metal Detector, Walkthrough metal detector mutengo, Door inofamba nesimbi detector.
GW : 80kg NW : 70kg metal detector usa
● Zvigadzirwa zvemvura: shandisa PVC michina yekugadzira & kushandiswa kwekushanda zvakajeka, mvura isingaiti, inopisa moto, inzwa kusagadzikana. Mvura yesimbi isina mvura inogadziridzwa, iyo inogona kugadzirisa chete muviri wemukova, asiwo inogona kuita basa risina mvura. ● Ratidza Panel: Uchishandisa LED yakajeka. Jeri rinofamba nepasimbi detector.
● Unyanzvi hwekugadzirisa zvakasiyana-siyana: kwete chete inogona kuona kugadzirisa bhuku, asiwo inogona kuita kuti ione guru guru rakagadziriswa nechinhu chakarambidzwa kuburikidza nekugadzirisa kunzwisisika kwegedhi rekuchengetedza mumagadzirirwo ayo arimo menyu. pd 6500i, Checkpoint Metal Detector, famba-kuburikidza nesimbi detector.
Chikepe, nzvimbo dzakasiyana-siyana dzemakambani, ruzivo rwakakura, nzvimbo yebhazi, gungwa rechiteshi, nzvimbo yekuvaraidza, jeri, mutemo wenyika, dhipatimendi rinokosha rehurumende, fekitari, imba yekuongororwa, misika yekutengesa, ruzivo rwekuchengetedzwa kwehutano chekuongorora uye kuongorora zvinyorwa zvinorambidzwa nzvimbo. iron detector world
Nhamba yepamusoro yemasuo eganda metal metal detector Bata Ikozvino
Metal Detector Usa Pd 6500i kubva Garrett Metal Detector World for Holiday Village Metal Detector Usati Metal Detector Bag Metal Detector Metal Detector Test Metal Detector Nz